Aphasia iyo dhibaatooyinka akhriska ee la helay: caawinta teknoolojiyada cusub - Tababarka Aqoonta
Halkan ayaad joogtaa: Bogga ugu weyn » Articles » aphasia » Aphasia la soo helay iyo dhibaatooyinka akhriska: caawinta tikniyoolajiyadda cusub
Isgaarsiinta waa xirfad muhiim u ah aadanaha, waana lagu dhaawici karaa heerar kala duwan oo dadka qaba aphasia. Dadka qaba aphasia, runti, waxay ku adkaan karaan ku hadalka, qorista, akhriska iyo fahamka nooc kasta oo luuqad ah. Cilmi baaristu waxay inta badan diirada saartay soo kabashada hadalka, layaabna malahan marka loo eego muhiimada ay xirfaddan u leedahay nolol maalmeedka. In yar oo dayacan, si kastaba ha noqotee, waa aagga cilladaha akhriska ee la helay. Tani inkastoo akhrisku waa xirfad muhiim u ah nolosha qof kasta oo inaga mid ah, iyo xitaa in ka sii badan kuwa kuwa, sababo shaqo ama madadaalo darteed, loogu bartay inay aqriyaan bogag badan maalin kasta. Knollman-Porter, 2019, wuxuu tilmaamay sida dhibaatooyinka akhrisku u horseedi karaan hoos u dhac weyn oo xagga tayada nolosha ah (isku kalsooni hoose, ka qaybqaadashada bulshada oo yaraata, niyad jab weyn) xitaa akhristayaasha aan xiisaha lahayn.
Waxaa dhowr mashruuc oo ka socda Mareykanka iyo Yurub oo ku tiirsan ka shaqeynta luuqadda dabiiciga ah (NLP), sida Mashruuca Simplext, oo ujeedadeedu tahay in si otomaatig ah loo fududeeyo qoraallada iyada oo loo daneynayo dadka qaba aphasia, ama HORE (waxaa loogu talagalay dadka qaba autism) kaas oo raadraaca oo beddelaya cunsurrada qoraalka caqabad ku noqon kara fahamka.
Dib-u-eegis ay sameeyeen Cistola iyo asxaabtiis (2020)  waxay diiradda saareen aaladaha loo adeegsaday waagii hore si loogu magdhabo dhibaatooyinka akhriska ee dadka qaba aphasia iyadoo dib loo eegay 13 maqaal oo laga helay keydadyo kala duwan. Cilmi baarayaashu waxay isku dayeen inay ka jawaabaan su'aalaha soo socda:
Qalab noocee ah ayaa la soo saaray si looga caawiyo dadka jilicsan dhibaatooyinka akhriska
Maxay yihiin astaamaha marin u helka ee qalabyada tiknoolajiyadeed ee sida ballaaran loo isticmaalay ee gacan ka geysan kara kalimaynta qoraalka qoraalka?
Sida su'aasha ugu horeysa, nasiib daro daraasada ayaa heshay mid la'aanta qalab gaar ah. Xaaladaha badankood dhowr qalab ayaa la wada isticmaalay (sida isku-dhafka hadalka ama muujinta qoraalka). Qalabkan waa la soo saaray, waa in la xoojiyaa, looma qorsheynin dadka qaba aphasia, laakiin waxaa loogu talagalay carruurta aan qallafsaneyn iyo dhalinyarada. Kuwani waa aalado weli waxtar u yeelan kara dadka neceb, laakiin inta badan ma oggola in la xalliyo dhibaatada la xiriirta akhriska.
Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la soo saaro qalab gaar ah oo loogu talagalay bukaanka aphasic. Qaybta ugu muhiimsan waxay noqon doontaa tan habayn si loola kulmo maqalka-maqalka iyo dhaqdhaqaaqa dhibaatooyinka.
Waxyaabaha muhiimka ah qaarkood waxay noqon doonaan:
Tayada isku-dhafka hadalka
Xawaaraha ereyga isku xirnaanta
Awoodda beddelka cabbirka qoraalka iyo kala-goynta erayada
Awoodda si toos ah loogu beddelo ereyada adag ama weedhaha qaabab fudud
Gabagabadii, wali waxaa jira waddo dheer oo loo maro. Qalab xoog leh oo la beddeli karo ayaa loo baahan doonaa. Si kastaba ha noqotee, waa wax yareyn kara jahwareerka, isku kalsoonida hoose iyo ku tiirsanaanta daryeelayaasha dadka qaba aphasia.
 Knollman-Porter, K., Wallace, SE, Brown, JA, Hux, K., Hoagland, BL iyo Ruff, DR, 2019, Saamaynta qoraalka, maqalka, iyo qaababka isku dhafan ee fahamka dadka qaba aphasia. Joornaalka Hadalka Mareykanka - Cilmiga Barashada Luqadda, 28, 1206–1221.
 G. Cistola, M. Farrús, I. van der Meulen (2020). "Aphasia iyo cillad xagga akhriska ah. Maxay yihiin astaamaha kale ee tiknoolajiyadda sare lagu kabo wixii cilladaha aqrinta ah? " Joornaalka Caalamiga ah ee Cilladaha Luqadda & Isgaarsiinta.
aphasia, aphasia iyo teknoolojiyada cusub, reading
Aphasia la soo helay iyo dhibaatooyinka akhriska: caawinta tikniyoolajiyadda cusub2020-12-172020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngTababbarka garashadahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/12/ezgif-2-628b5dc636f7.png200px200px
Daaweynta fahamka ee aphasiaaphasia
Isticmaalka qoraallada - ama shaashadaha - ee aphasiaaphasia